Hominy casserole - uzommeputa Como-Quiero - Como Quiero
350 grams Anụ nwa ehi (babilla)
500 milliliters Mmanya ọcha tetra
1/2 nkeji Carrot
1/2 nkeji Yabasị
1/4 nkeji Red ose
1/2 ị tablespoons Thyme
1 ị tablespoons Chile ose tapawa
1/2 Foto Ụlọ Nga Aha otutu
1 ị tablespoons Ude
1/2 Foto Ụlọ Nga Pasili
Na a saucepan etinye anụ, mgbe ahụ, wụsa mmanya ọcha, abụọ iko mmiri ọ bụla 1L nke wine, yabasị ịkpụ n'ime 4, paprika na carrot n'ime oké Mpekere. Tinye nnu, ose, thyme na a kloovu nke garlic ma ọ bụrụ na ị na-dị ka. Ime maka 1 hour na ọkara ka 2 awa simmer na ite kpuchie. The anụ nwere na-kama soft. I nwere ike ime ya na a nsogbu EBUARD nwekwara; Ha bụ banyere 45 nkeji nke-esi nri.
Mgbe sácala ndepụta nke efere bụ desmenúzala na a table eji a ndụdụ. Gbalịa ịnọgide shreds ogologo. Mgbe okokụre, na-etinye ha na a mmiri na efere na cover na otu ma ọ bụ abụọ ladles nke efere. Tinye na ose, ma ebido mix na efere na anụ. Tụgharịa na oven.
Nje efere na-ahapụ ya na ite. Na-etinye na akwụkwọ nri na a na tebụl na diced pícalas, ma ọ bụghị nke ukwuu nke na-eme bụghị puree. Wepụnụ ha na ite na oven.
Na oven na obere okpomọkụ, na-etinye anụ na akwụkwọ nri. Site mgbe ke a colander, saa ọma na mgbe ahụ na-etinye ya mote na a ite na abụọ iko mmiri kwa mote cup. Cover na ebe a ga-ewe iwe dị ọkụ. Mgbe ọ na-esi obere okpomọkụ ubé ma esi nri maka 20 na 25 nkeji. Lelee ụfọdụ ya na oven, ka ihe niile bụ ezi. Ọ ga-abụ gburugburu browning ubé n'elu. Put ite okpomọkụ na efere na ule na ọ hụ otú nnu.
Mgbe moniker dị njikere, ma ọ bụrụ na e ka mmiri, kpaa ya ma laghachi ya ite. A obere okpomọkụ, tinye butter, nnu na ose, na mix ọma. Mgbe ahụ wụsa ude na pasili.
Iji na-eje ozi ofe efere na mbụ na-ewe iwe na mmiri ọkụ, na-etinye aha otutu, meatloaf na akwụkwọ nri. Topped na 2-3 ladles nke efere. Gịnị obi ụtọ.
* Nyefee. 441 kcal, 22% nke 2,000 kcal / p tụrụ aro otu ụbọchị
22% Abuba 10%
22% Carbohydrates 17%
22% Mineral 19%
22% Protein 17%
22% Vitamin 37%